तस्वीर सौजन्य : साझापोस्टडटकम
बाँदरे मोडमा लामिछाने दम्पतीलाई प्रत्यक्ष भेटेकी होटल सञ्चालक वदनकुमारी श्रेष्ठ ।
होटलमा दिनहुँ सयौं मान्छे आउँछन्–जान्छन्। को कहाँको कता जान लागेको भने केही पनि सोधिनँ। एकछिनपछि ‘मान्छे बगायो–बगायो’ भन्ने हल्लाखल्ला आयो। मेरी बहिनीका छोराहरू कायक चलाउँथे। हत्तपत्त उनीहरू कायक लिएर दगुरे। केही बेर तल पुगेपछि केटाहरूले बूढाबूढीलाई समातेर निकालेछन्। बच्चाहरू फेला परेनन्। उनीहरू त्यही दम्पती रहेछन्, केही बेरअघि यही बसेर बच्चालाई दूध खुवाएर गएका थिए। (भक्कानिँदै) पानीमा ती बच्चाहरूलाई कस्तो भयो होला ? कति निसास्सिए होलान् ? बरु बच्चा यही छाडेर गइएको भए मै पालिदिन्थें।(बाँदरे मोडमा होटल सञ्चालक वदनकुमारी श्रेष्ठसँगको कुराकानी) अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।